Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कहिले हुन्छ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर ? – Emountain TV
कहिले हुन्छ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर ?
काठमाडौं, २ फागुन । वर्तमान सरकार गठनको दुई वर्ष पुरा भएको छ । दुई वर्ष बित्दा सरकारले घोषणा गरेको जनअपेक्षित आधारभूत आवश्यकता कति पूरा भए ? अहिले आम नागरिकका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
सरकारले दुई वर्ष भित्र आधारभूम खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो घोषणा घोषणामै सीमित देखिएको छ । खाद्यन्न आयातलाई रोक्ने त कुरै छोडौं अझै कतिपय जिल्ला भोकमरीको चपेटामा गुज्रीरहेका छन् ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने केपी शर्मा ओलीको सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित देखिएको छ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने सरकारको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
तर अझै पनि देशका २३ जिल्लाका सर्वसाधारण खाद्य संकटबाट गुज्रीरहेका छन् । सरकारले दुर्गम स्थानमा १ लाख ७० कुईन्टल खाद्यान्न पठाएको थियो भने यो वर्ष १ लाख ५० हजार कुईन्टल पठाउने तयारी गरेको छ ।
मुलुकभित्र करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेती योग्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको सरकारको दाबी छ ।
सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख खाद्यवस्तु आयातमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अझै पनि हामी कृषिमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । बिनाकार्ययोजना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको सर्वसाधारण बताउँछन ।
देशका हिमाली क्षेत्रका केहि जिल्ला र सुदूरपश्चिमका हुम्ला, बझाङ लगायत अन्य २३ दुर्गम जिल्लामा अहिले पनि खाद्यान्नको अभाव छ । सरकारले किनेरै त्यहाँ खाद्यान्न पठाउने गरेको छ । तर त्यहि स्थानिय उत्पादनलाई कसरी बढाउने भन्ने तिर भने सरकारले खासै चासो दिएको पाईदैन ।
अझै पनि धेरै जसो जमिन सिंचाई तथा मल अभावमा बाँझै रहेका छन् । उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता र सिँचाइ अभावकै कारण धान लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।
यो स्थितिले सरकारले घोषणा गरेर पनि दुई वर्ष भित्र आधारभूत खाद्यन्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन त सकेन नै पाँच वर्ष भित्र नेपालबाट खाद्यन्न निर्यात गर्ने भनी गरिएको घोषणा पनि कोरा सपना हुने देखिएको छ ।